Izindaba - Flour Milling
Imishini yokugaya ufulawa isikulufa esihambayo
Ezingxenyeni zikafulawa, ama-screw conveyers avame ukusetshenziselwa ukudlulisa izinto. Yimishini yokudlulisa ethembele emijikelezweni ejikelezayo ukuze icindezele izinto ngobuningi ukunyakaza okuvundlile noma ukuhambisa okuthambekele.
I-TLSS series screw conveyor inezici zesakhiwo esilula, icwecwe, ukusebenza okuthembekile, ukunakekelwa okulula, ukubekwa uphawu okuhle, kungondliwa noma kuthulwe ngaphezu kwawo wonke ubude bokusebenza, futhi kungahanjiswa ngezikhombisi ezimbili kusayizi owodwa. Kufanele ukuhambisa izinto eziyimpuphu nezinto eziyimbudumbudu.
I-TLSS chungechunge lokuhambisa isikebhe sakhiwe ikakhulukazi nge-screw shaft, umshini wokufaka umshini, ilenga lokuthwala nedivayisi yokudlulisa. Umzimba wokuvunguza ushiselwe ngamacembe okuvunguza kanye ne-mandrel. I shaft yokudlulisela esebenzayo iyishubhu yensimbi engenamthungo. Ubude bokuhambisa bungasethwa ngokufunwa.
Umthelela Detacher umshini ufulawa isigayo
Uchungechunge lwe-FSLZ lwe-Impact Detacher lusetshenziswa kakhulu njengemishini yokulekelela yohlelo lokuxubana nefulawa ukuthinta izinto zokwethula ufulawa futhi kwandise ngempumelelo izinga lokuqothulwa.
Umshini ikakhulu yakhiwa okuphakelayo itheku, stator disk, Rotor disk, bezinhlamvu, motor nezinye izingxenye. I-outlet isethwe ngaku-tangential direction of the casing futhi ixhunywe kupayipi lokuhambisa umoya. Izinto zingena zisuka kokungena okuphakathi komshini bese ziwela kudiski elijikeleza ngesivinini esikhulu. Ngenxa yamandla we-centrifugal, okokusebenza kunodlame phakathi kwe-stator nephini le-rotor. Ngemuva komthelela, iphonswa odongeni lwegobolondo, ama-flakes aphukile ngenxa yomthelela oqinile, futhi afuthwe ngokugeleza komoya egobolondweni echwebeni lokukhipha ukuqedela inqubo yokuqothula ufulawa.
Isihlambululi esigayweni sefulawa
I-purifier iyinsiza ebaluleke kakhulu esigayweni sefulawa. Isebenzisa isenzo esihlanganisiwe sokusikwa nokugeleza komoya ukuze kuhlolwe ufulawa.
Izinto zokuphakela zisebenzisa ukudlidliza kwensiza yokuphakela ukwenza okokusebenza kumboze bonke ububanzi besikrini. Ukuncika ekudlidliziseni komzimba wesikrini, okokusebenza kuya phambili futhi kugqinsiwe ebusweni besikrini futhi kwasatshalaliswa esikrinini esinezingqimba ezintathu. Ngaphansi kwesenzo esihlanganisiwe sokudlidliza nokugeleza komoya, okokusebenza kuhlukaniswa futhi kugqinsiwe ngokuya ngosayizi wezinhlayiyana ohlukile, amandla adonsela phansi kanye nesivinini sokumiswa.
Ngesikhathi senqubo yokuhlanza ufulawa, ukugeleza komoya okuphansi kudlula ungqimba lwezinto ezibonakalayo, kumunca imfucumfucu yamandla adonsela phansi aphansi, izinhlayiya ezinkulu ziqhutshelwa phambili emsileni wesikrini, izinhlayiya ezincane ziwela esikrinini, nezinto ukudlula esikrinini kuqoqwe Ku-tank yokudlulisa impahla, izinto ezahlukahlukene ezisuswe ngesihlungi zidlula ethangini lokuhambisa impahla nebhokisi lokukhipha impahla, futhi liyakhishwa ngokuya ngezidingo zenqubo.